आजको राशिफल वि.सं. २०७५ साल जेठ २३ गते। बुधबार। - KalaiyaLive.Com.Np
By कलैयालाईभ	 On Jun 6, 2018 61
इश्वी सन् २०१८ जुन ६ तारिख। शकसंवत् १९४०। विरोधकृत् संवत्सर। उत्तरायण। ग्रीष्म ऋतु। नेपाल संवत् ११३८ अनलागा। अधिक ज्येष्ठ कृष्णपक्ष। तिथि– सप्तमी, ७:१२ बजेउप्रान्त अष्टमी। नक्षत्र– शतभिषा, १६:५५ बजेउप्रान्त पूर्वभाद्रपदा। योग– विष्कम्भ, २०:२६ बजेउप्रान्त प्रीति। करण– वव, ७:१२ बजेदेखि वालव, १९:४६ बजेउप्रान्त कौलव। आनन्दादिमा मानस योग। चन्द्रराशि– कुम्भ। काठमाडौंमा सूर्योदय– ५:१० बजे, सूर्यास्त– १८:५६ बजे र दिनमान ३४ घडी २५ पला। पञ्चक। अष्टमी व्रत। गोरखकाली पूजा।
तपाईंले अवकाशको खुशीलाई रमाइलो पार्न जानु हुँदैछ। आशिष् र राम्रो भाग्य तपाईंको बाटोमा आउनाले इच्छा पूरा हुनेछ – र यो अघिल्लो दिनको कठिन कामको परिणामले गर्दा हो। तपाईंले समयमा गरेको मद्दतले कसैको जीवन बचाउन सक्छ। समाचारले तपाईँको परिवारका सदस्यहरूलाई गर्व हुने र तिनीहरूलाई प्रेरित पनि गर्नेछ। तपाईं प्रेम प्रस्ताव राखेर धेरै खुशी हुनुहुनेछ किनकि यसले तपाईंको भारी हलुँगो पार्नेछ। तपाईंको नयाँ योजना र उद्यमको बारेमा भागीदारहरू उत्साहित हुनेछन्। आज मान्छेहरूले तपाईंको प्रशंसा गर्नेछन् – जुन तपाईंले सधैं सुन्न चाहनु हुन्थ्यो। आज तपाईंको जोडी साँच्चै नै राम्रो मुडमा छ। तपाईंले एउटा आश्चर्य प्राप्त गर्न सक्नु हुन्छ।
अप्रत्याशित यात्राले गलाउन सक्छ। ठट्टामा आधारित अनुमानमा नलाग्नुहोस्। तर्क र असहमतिका कारणले घरमा केही अप्ठ्यारा समयहरू आउन सक्छन्। रोमान्सको रोमाञ्चक दिन – साँझको लागि केहि विशेष योजना बनाउनुहोस् र त्यसलाई सकेसम्म रोमान्टिक बनाउने प्रयास गर्नुहोस्। आफ्नो काममा ध्यान दिनुहोस् र भावनात्मक तर्कमा स्पष्ट रहनुहोस्। आफ्नो तालिकामा अन्तिम मिनेटको परिवर्तनहरूको कारणले तपाईंका यात्रा योजनाहरू सर्न सक्छन्। तपाईंको जोडी साँच्चै नै तपाईंको लागि स्वर्गदूत हो, र तपाईंलाई यस कुराको आज थाहा हुनेछ।
राम्रो स्वास्थ्यको कारण तपाईं खेल प्रतियोगितामा भाग लिन सक्षम हुनुहुनेछ। अनियोजित स्रोतबाट पैसा लाभ हुनाले आजको दिन उज्यालो हुनेछ। परिवार र साथीहरूसँग रमाइलो समय बित्नेछ। तपाईंले आफ्नो जीवन भन्दा बढी तपाईंलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति भेट्नु हुनेछ। आफ्नो दृष्टिकोणमा इमानदार र सही हुनुहोस् – तपाईंको सङ्कल्प र कौशलले परिचय प्राप्त गर्नेछ। आज धेरै समस्याहरू हुनेछन् – जसलाई तत्काल ध्यान दिनु आवश्यक छ। तपाईंको वैवाहिक जीवन राम्रो बनाउने प्रयासले आज आशा गरेकोभन्दा राम्रो फल दिनेछ।
एउटा मित्रले तपाईंको खुल्ला मन र सहिष्णुता शक्तिको परीक्षण गर्न सक्छ। तपाईंले आफ्नो मान आत्मसमर्पण गर्नु हुँदैन र हरेक निर्णयमा तर्कसङ्गत हुन होसियार हुनुपर्छ। बचाएको पैसा अचल सम्पत्तिमा निवेश गर्नुपर्छ। एउटा पुरानो मित्रले दिनको पछिल्लो भागमा रमाइलो भेट गर्नेछ। व्यक्तिगत सम्बन्ध संवेदनशील र कमजोर छन्। आज तपाईंले आफुले राम्रो काम गरिरहेको आफ्ना परिवारको समर्थनले हो भन्ने कुराको महसुस गर्नु हुनेछ। कसैको लागि अप्रत्याशित यात्रा व्यस्त र तनाउपूर्ण प्रमाणित हुनेछ। तपाईंले आज आफ्नो जोडीको कठिन र साहसी पक्षको अनुभव गर्न सक्नु हुन्छ जसले गर्दा तपाईंले असहज महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको साँझले तपाईंलाई तनाउयुक्त राख्न सक्ने मिश्रित भावना दिनेछ। धेरै चिन्ता गर्ने तर कुनै आवश्यकता छैन – किनकि खुशीले तपाईंलाई निराशाले भन्दा बढी आनन्द दिनेछ। अनुमान वा अनपेक्षित लाभ मार्फत वित्तीय स्थितिमा सुधार आउनेछ। सारा परिवारको लागि समृद्धि ल्याउने परियोजनाहरू तपाईंले चुन्नु पर्नेछ। भावनात्मक रोकावटले तपाईंलाई समस्यामा पार्नेछन्। तपाईं सबैको लागि आज धेरै सक्रिय र सामाजिक कार्य गर्ने राम्रो दिन हुनेछ – मानिसहरूले सल्लाहको लागि तपाईंको मुख हेर्नेछन् र तपाईंले जे भन्नुहुन्छ त्यही मान्नेछन्। सेमिनार र प्रदर्शनीहरूले तपाईंलाई नयाँ ज्ञान र सम्पर्क प्रदान गर्नेछ। आफन्तहरूले आज तपाईंको जोडीसित तर्क गर्न सक्छन्।
आज आफ्नो उँचो विश्वासलाई सदुपयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। व्यस्त दिन भए तापनि तपाईँले अझै पनि आफ्नो ऊर्जा फर्काएर ल्याउन सक्षम हुनुहुनेछ। तपाईं यात्रा र पैसा खर्च गर्ने मुडमा हुनुहुनेछ – तर त्यसो गर्नुभयो भने तपाईं पछुताउनु हुनेछ। तपाईंको व्यक्तिगत जीवनमा मित्रहरूले आवश्यकता भन्दा बढी हस्तक्षेप गर्नेछन्। व्यस्त सडकमा तपाईंले आफुलाई भाग्यमानी भएको महसुस गर्नुहुनेछ किनकि तपाईंकी प्रियतमा सबैभन्दा राम्री छन्। तपाईं प्रभावशाली मान्छेको छेउछाउमा हिंडीरहनु भयो भने तपाईंले आफ्नो क्यारियरमा ठूलो उन्नति गर्नु हुनेछ। आफ्नो योजनामा अन्तिम मिनेटसम्म पनि परिवर्तनहरू हुन सक्छ दिन। छुने, चुम्बन, अंकमाल आदि कुराको वैवाहिक जीवनमा विशेष महत्त्व छ। तपाईंले यसलाई आज अनुभव गर्नु हुनेछ।
तपाईंको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन सक्ने कुरामा काम गर्ने लाभदायी दिन। आजैको दिनको लागि मात्रै बाँच्ने र मनोरञ्जनमा धेरै समय र पैसा खर्च गर्ने आफ्नो बानीमा नियन्त्रण गर्नुहोस्। तपाईंले आफ्ना छोराछोरीबाट केही सिक्नु हुनेछ। तिनीहरूमा धेरै शुद्ध प्रभामण्डल छ र आफ्नो निर्दोष हर्ष र नकारात्मकताको अभावको कारण तिनीहरूले वरिपरि परिवर्तन गर्न सक्छन्। तपाईंको प्रेमीकासँग केही भेद उत्पन्न हुन सक्छ – तपाईंले आफ्नो जोडीलाई आफ्नो स्थिति बुझाउने प्रयास गर्न गाह्रो पर्नेछ। तपाईंले कुनै पनि महँगो उद्यमको लागि साइन अप गर्नु अघि आफ्नो निर्णयको प्रयोग गर्नुहोस्। केही कानुनी सल्लाह लिनको लागि वकीलसँग भेटघाट गर्ने राम्रो दिन। आज तपाईंलाई एकजना आफन्तले आश्चर्य दिन सक्छ, तर यसले तपाईंको योजनामा बाधा पुर्याउन सक्छ।
आज तपाईंले धेरै खिचलो र फरक विचारहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ जसले तपाईंले रिस उठ्ने र अप्ठ्यारो गर्नेछ। संयुक्त उद्यम र शंकास्पद वित्तीय योजनाहरुमा लगानी नगर्नुहोस्। पारिवारिकसँग सम्बन्ध र बन्धनको नवीकरणका लागि उचित दिन। घरेलू जिम्मेवारीबाट बच्नाले र पैसाको विषय लिएर झैझगडा गर्नाले तपाईंको वैवाहिक जीवन बिगार्न सक्छ। आईटी पेशावरहरूलाई आफ्नो उत्साह प्रमाणित गर्ने मौका प्राप्त हुनेछ। तपाईंले सफलता हासिल गर्न एकाग्रता राख्नुपर्छ र निरन्तर बढि नै काम गर्न आवश्यक छ। समस्याको शीघ्रतापूर्ण कार्य गर्ने क्षमताले तपाईंको पहिचान बनाउनेछ। आज आफ्नो जोडीले तपाईंलाई आफुले जान्न नचाहेको केही बताउन सक्छन्।
आफैं उपचार नगर्नुहोस् किनकि दबाइमा निर्भरताको सम्भावना बढ्न सक्छ। तपाईंले वित्तीय लाभ हुने शानदार नयाँ विचार गर्नु हुनेछ। आफन्तहरूले तपाईँको शोक बाँट्नेछन्। तिनीहरूसँग आफ्नो समस्या सुनाउन खुल्ला महसुस गर्नुहोस्। तपाईंले निश्चित नै समस्याहरूको समाधान निकाल्नु हुनेछ। तपाईं मायालु मुडमा हुनुहुनेछ – त्यसैले आफ्नो र आफ्नो प्रियको लागि विशेष योजना बनाउने निर्णय गर्नुहोस्। तपाईंको विश्वास बढ्दैछ र उन्नति स्पष्ट छ। तपाईंको मनमा भएको कुरा भन्न नडराउनुहोस्। तपाईंको जोडी यति सुन्दर कहिल्यै थिएन। तपाईंलाई आफ्नो जीवनको प्रेमबाट राम्रो आश्चर्य प्राप्त हुन सक्छ।
केही मानसिक दबाब भए तापनि स्वास्थ्य राम्रो हुनेछ। तपाईंले बचत निवेशमा आफ्नो बचत राख्नुभयो भने तपाईंलाई राम्र फाइदा हुनेछ। आमाको रोगले केही चिन्ता हुन सक्छ। तपाईंले केही अन्य कुराहरू गरेर रोगबाट उहाँको ध्यान हटाउनु पर्छ र उहाँको रोग कम गर्नु आवश्यक छ। तपाईंको सल्लाह रामबाणको झैं काम गर्नेछ। तपाईंको प्रेमीले आज उपहारका साथ केही समयको आशा गर्न सक्छन्। तपाईंको नयाँ योजना र उद्यमको बारेमा भागीदारहरू उत्साहित हुनेछन्। कर र बीमाको विषयमा केही ध्यान दिनु आवश्यक हुनेछ। यो विवाहको उज्यालो पक्ष अनुभव गर्ने दिन हो।
धेरै चिन्ता र तनाउले तपाईंको स्वास्थ्य बिगार्न सक्छ। तपाईंले मानसिक स्पष्टता कायम गर्न भ्रम र निराशा त्याग गर्नु पर्नेछ। लामो समयदेखि रोकिएको अवशिष्ट र बकाया अन्तमा बरामद गरिनेछ। आफ्ना परिवारका सदस्यहरूको भावनामा चोट लाग्नुबाट जोगिन आफ्नो स्वभावमा नियन्त्रण गर्नुहोस्। तपाईं आज आफ्नो साथीको धुकधुकीसँग समन्वयन हुनुहुनेछ। हो, यो तपाईं प्रेममा हुनुहुन्छ भन्ने चिन्ह हो! काममा तपाईंको सफलताको बाटो रोक्नेहरूलाई आज तपाईंले आफ्नै आँखा अगाडि गंभीर पतन भएको देख्नु हुनेछ। तपाईंलाई बहकाउन वा केही हानि हुन सक्ने जानकारी दिने प्रयास गर्ने व्यक्तिहरूबाट जोगिनुहोस्। राम्रो खाना र रोमान्टिक क्षण; सबै आज तपाईंलाई प्राप्त हुनेछन्।
ज्योतिष परामर्श केन्द्र सिमरा १ बारा ,९८५५०२९४०१,